Wararka - Maxaan u nidhaahnaa gelatinku wuxuu daboolayaa baahida caalamiga ah ee waara?
Sanadihii la soo dhaafay, bulshada caalamku waxay aad iyo aad ugu sii jeesatay horumarka waara, is afgaradna waa laga gaadhay adduunka oo dhan. Marka la barbardhigo xilli kasta oo ka mid ah taariikhda ilbaxnimada casriga ah, macaamiisha ayaa aad ugu firfircoon badalida caadooyinka xunxun si loo dhiso adduun ka wanaagsan. Waa dadaal bani'aadam oo loogu talagalay in lagu sii wado oo loo isticmaalo mas'uuliyadda kheyraadka dhulka.
Mawduuca mawjaddan macaamiisha cusub ee mas'uulka ka ah ayaa ah raadinta iyo daahfurnaanta. Taas macnaheedu waa, dadku mar dambe dan kama laha isha cuntada ee afkooda ka soo baxda. Waxay rabaan inay ogaadaan halka cuntada laga helo, sida loo sameeyo iyo haddii ay la kulanto heerarka akhlaaqeed ee aadka u qiimeeya.
Gelatin waa mid aad u waara
Iyo si adag u taageer heerarka daryeelka xoolaha
Gelatin waa nooc ka mid ah waxyaabo cayriin oo badan oo shaqeynaya oo leh astaamo waara. Waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan gelatin waa inay ka timaaddo dabeecadda, ee aysan ahayn isku-darka kiimikada, taas oo ka duwan cuntooyinka kale ee badan ee suuqa yaalla.
Faa'iidada kale ee warshadaha gelatinku bixin karaan ayaa ah in wax soo saarka soo-saarka gelatin ee loo isticmaalo loo isticmaali karo quudin ahaan ama bacriminta beeraha, ama xitaa shidaal, taas oo sii dhiirrigelinaysa ku darsiga gelatin ee "dhaqaalaha qashinka eber".
Marka laga eego aragtida soosaarayaasha cuntada, gelatin waa shey ceyriin badan oo shaqeynaya oo wejiyo badan leh, kaas oo dabooli kara baahiyaha qaabab kala duwan. Waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay xasiliyaha, dhumuc weyn ama wakiil jilicsan.
Sababtoo ah gelatinku wuxuu leeyahay shaqooyin iyo astaamo kala duwan, soo saarayaasha uma baahna inay ku daraan waxyaabo kale oo badan oo dheeri ah marka ay isticmaalayaan gelatin inay soo saaraan cunto. Gelatin wuxuu yareyn karaa baahida loo qabo in lagu daro, taas oo badiyaa ku jirta e koodhadh maxaa yeelay iyagu maahan cuntooyin dabiici ah.